ဆိုငျကယျအငျဂငျြ ကောငျးပွီး ရရှေညျကောငျးမှနျစေ ဖို့အတှကျ လိုကျနာရမယျ့အ ခကျြလေးတှေ – Nyi Ma Lay
ဆိုငျကယျအငျဂငျြ ကောငျးပွီး ရရှေညျကောငျးမှနျစေ ဖို့အတှကျ လိုကျနာရမယျ့အ ခကျြလေးတှေ
မွနျမာလူမြိုး တို့ရဲ့ အကွိုကျ ပစ်စညျးတ ဈခုဝယျရငျ ဘာပစ်စညျးပဲဖွ ဈနနေေ ဈေးသကျသာပွီး တာရှညျခံတာမြိုးကို လိုခငျြကွပါတယျ။ ဈေးသကျသာ တာကိုသာ ရှေးခယျြဖို့ ဆုံးဖွတျွ ကတာက ပိုမြားပါတယျ။ ဆိုငျကယျ တဈစီး ဝယျတဲ့အခါမှာလညျး မွို့ကွီးတှေ ကလှဲရငျ နယျမွို့တှမှော ဈေးသကျသာလေ ကွိုကျလေ ဆိုတဲ့ အကငျြ့က လူတျောတျော မြားမြားမှာ စှဲမွဲနကွေပါတယျ။
ဆိုငျကယျ တဈစီးမှာလညျး ဈေးနှုနျးနဲ့ထပျတူ Brand အလိုကျ ဈေးကောငျးရငျ ကောငျးသလို အရညျအသှေးကှာခွားပါတယျ။
ဆိုငျကယျတဈစီးရဲ့ အရညျအသှေးဆို တဲ့နရောမှာ အဓိက ဆိုငျကယျအငျဂငျြ ရုနျးအားဆှဲအားနဲ့ ကွာရှညျအသုံးခံမှုကို ကွညျ့ရှုကွပွီး တညျဆောကျမှုမှာ ပါဝငျတဲ့ သံဖရိမျနဲ့ ကာဗာတှေ ကွံ့ခိုငျမှုရှိမရှိကို ဒုတိယအေ နနဲ့ ကွညျ့ရှုလရှေိ့ကွပါတယျ။
လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံဈေးကှကျမှာ ရောငျးခနြတေဲ့ ဆိုငျက ယျတှကေို လလေ့ာကွညျ့ရငျ တရုတျဆိုငျကယျထဲမှာ Haojue ဆိုငျကယျတဈမြိုးတညျးသာ အငျဂငျြ ၂ နှဈအာမခံပေးပွီး KenBo, Lifan. ZongShen စတဲ့ နာမညျရ Brand တှကေတော့ အငျဂငျြ ၁ နှဈအာမခံပေးကွတာ တှရေ့ပါတယျ။
လကျရှိ ဈေးကှကျထဲ မရမေတှကျနိုငျအောငျ ဝငျရောကျနတေဲ့ တရုတျတံဆိပျသဈဆိုငျကယျတှမှောတော့ အငျဂငျြ ၅ လအာမခံ၊ ၃ လအာမခံပေးကွသလို အမြားစုကတော့ အငျဂငျြ Warranty မပေးကွပါဘူး။
အငျဂငျြ Warranty မပေးတဲ့ တရုတျတံဆိပျသဈဆိုငျကယျတှကေို လလေ့ာကွညျ့ရငျ Spare Parts ရရှိမှုပါ ခကျခဲနတေတျတာ လလေ့ာတှရှေိ့ရပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အကောငျးဆုံးကတော့ ရုနျးအားဆှဲအားကောငျးတဲ့ အငျဂငျြကို ရရှိခငျြတယျ သငျ့ဆိုငျကယျကို ကွာရှညျအသုံးခံခငျြတယျဆိုရငျ ဈေးနှုနျးထကျ အရညျအသှေးကောငျးမှနျမယျ့ နာမညျရ Brand တှကေို ရှေးခယျြဝယျယူစီးနငျးဖို့ လိုပါတယျ။
နာမညျရ Brand တှေ ဝယျစီးရုံနဲ့မပွီးဘဲ ပုံမှနျထိနျးသိမျးတတျဖို့ပါလိုအပျတာကွောငျ့ C & C Info ရဲ့ ဆိုငျကယျခဈြသူတှအေတှကျ ဆိုငျကယျအငျဂငျြသကျတမျးကွာရှညျခံခငျြတယျဆိုရငျ လိုကျနာကငျြ့သုံးရမယျ့ အခကျြတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Brand New ဆိုငျကယျတိုငျး အငျဂငျြကငျြ့ပေးရပါတယျ
ဆငျပေါကျစလေးတဈကောငျ မှေးပွီး လသားအရှယျမှာတငျ သှားနိုငျအောငျ ခိုငျးတာလုပျတတျအောငျ လကေ့ငျြ့ပေးရသလိုပဲ ဆိုငျကယျတဈစီးမှာလညျး စတငျဝယျယူခါစ Brand New ဆိုငျကယျရဲ့ အငျဂငျြကို လကေ့ငျြ့ပေးရပါတယျ။
သကျရှိသတ်တဝါမဟုတျဘူး စကျပစ်စညျး ငါခိုငျးရငျ ခိုငျးသလို လုပျပေးမှ ငါမောငျးခငျြသလို မောငျးမှာပဲ ဆိုတဲ့စိတျရှိနရေငျတော့ သငျ့ဆိုငျကယျရဲ့ အငျဂငျြသကျတမျးဟာ ကွာရှညျခံမှာ မဟုတျသလို ငှကွေေးပေါငျး သိနျးခြီပေးပွီး ဝယျရကြိုးလညျး နပျမှာ မဟုတျပါဘူး။ နောကျဆကျတှဲအနနေဲ့ ပွငျဆငျစရိတျတှပေါ ကပျပါလာမှာဖွဈပါတယျ။
စတငျဝယျယူခါစ Brand New ဆိုငျကယျရဲ့ အငျဂငျြသကျတမျးကွာရှညျခံခငျြတယျဆိုရငျ စတငျမောငျးခြိနျကတညျးက လအနညျးကွာသညျအထိ အရှိနျပွငျးပွငျး မောငျးတာထကျ သာမနျအရှိနျနှုနျးသာရှိတဲ့ ကီလိုအနညျးငယျပဲ မောငျးနှငျဖို့လိုပါတယျ။
နာမညျရ Brand တှရေဲ့ Techanical ပညာရှငျတှေ သတျမှတျထားတာကတော့ စတငျဝယျယူခါစမှာ ကီလို0ရှိတာကွောငျ့ ကီလို0ကနေ 160 ကီလိုမီတာအတှငျးဆိုရငျ တဈနာရီကို ၃၅ ကီလိုမီတာအမွနျနှုနျးနဲ့သာ အသုံးပွုမောငျးနငျသငျ့ပွီး ကီလို 160 မှ 800 ကီလိုမီတာအတှငျးဆိုရငျတော့ တဈနာရီ ၄၅ ကီလိုမီတာ အမွနျနှုနျးနဲ့ပဲ မောငျးနှငျသငျ့တယျလို့ အကွံပွုထားကွပါတယျ။
အဲဒီလိုပဲ ဒိုငျခှကျမှာ ပွသပေးနတေဲ့ ကီလို 800 အတှငျးကနေ 1600 အတှငျးဆိုရငျ တဈနာရီ ၅၅ ကီလိုမီတာအမွနျနှုနျးနဲ့သာ မောငျးနှငျသငျ့သလို ကီလို 1600 အတှငျးကာလထိ High Way ထှကျတာမြိုးတှေ မလုပျသငျ့ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုရငျ High Way သှားပွီဆိုကတညျးက ဘယျသူမဆို အမွနျရောကျခငျြကွတာဖွဈလို့ ဒိုငျခှကျမှာပွနတေဲ့ ကီလိုမီတာ အမွနျနှုနျးကို သတိမပွုတော့ဘဲ လမျးကောငျးရငျ ကောငျးသလို ယာဉျကွောရှငျးရငျ ရှငျးသလို အမွနျမောငျးနှငျတတျကွတာကွောငျ့ Service ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှကေ အခုလို သတိပေးထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
အငျဂငျြကငျြ့ရမယျ့ ကီလို 1600 ကာလအတှငျးမှာ အကယျ၍ ကီလိုအလိုကျ သတျမှတျအမွနျနှုနျးထကျ ကြျောလှနျမောငျးနှငျခဲ့မယျဆိုရငျ လပိုငျးအနညျးငယျအတှငျးမှာပဲ အငျဂငျြစကျသံနဲ့ အိပျဇောကနေ ထှကျလာတဲ့ အသံဟာ ဆူဆူညံညံတှေ ထှကျပျေါလာတတျပါတယျ။
တခြို့ Honda ဆိုငျကယျ Brand New ဝယျစီးပွီး လအနညျးငယျအတှငျးမှာ စကျသံဆူညံနလေို့ဆိုတဲ့ ပွဿနာရဲ့ အရငျးအမွဈက အငျဂငျြကငျြ့ရမယျ့ ကာလမှာ မွနျနှုနျးမွငျ့မောငျးမိတာကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဆိုငျကယျခဈြသူတှအေနနေဲ့ အငျဂငျြကငျြ့ရမယျ့ကာလ ကီလို 1600 အတှငျးမှာ High Way ထှကျတာမြိုးမလုပျဘဲ သူ့သတျမှတျကီလိုအလိုကျ အမွနျနှုနျးကို အတိုငျးအတာတဈခုအထိသာ မောငျးနှငျဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။
အရညျအသှေးမီ အငျဂငျြဝိုငျကို ထညျ့ပါဆိုငျကယျ Brand New စဝယျပွီဆိုတာနဲ့ တခြို့က ဆိုငျကယျမှာပါတဲ့ အငျဂငျြမှာပါရှိပွီးသား အငျဂငျြကငျြ့ဆီကို ၅ ရကျ(သို့) တဈပတျခနျ့ စီးနငျးခိုငျးတာလညျးရှိသလို တခြို့ဝပျရှော့ဆရာတှကေ အငျဂငျြဝိုငျအသဈတဈဘူးကို ခကျြခငျြးလဲပေးလိုကျတာလညျး ရှိပါတယျ။
အကောငျးဆုံးက အငျဂငျြမှာ Original ပါရှိတဲ့ အငျဂငျြကငျြ့ဆီဟာ ကငျြ့ဆီလို့ သတျမှတျတာကွောငျ့ High Way သှားတာမြိုးမဟုတျခဲ့ရငျ တဈပတျခနျ့ စီးနငျးပွီးမှ အငျဂငျြဝိုငျအသဈတဈဘူးကို လဲလှယျသငျ့ပါတယျ။
အငျဂငျြဝိုငျအသဈတဈဘူးရဲ့ ဆီအရညျအသှေးနဲ့ Original ကငျြ့ဆီရဲ့ ဆီအရညျအသှေး မတူသလို ကငျြ့ဆီဟာ ကငျြ့ဆီလို့ သတျမှတျတာကွောငျ့ တဈပတျခနျ့စီးနငျး အငျဂငျြကငျြ့ခိုငျးပွီးမှ အငျဂငျြဝိုငျအသဈတဈဘူးကို လဲလှယျပေးဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။
အဲဒီလိုပဲ အငျဂငျြဝိုငျအသဈတဈဘူး လဲလှယျတဲ့အခါမှာလညျး ဈေးနှုနျးခြိုသာတာထကျ အရညျအသှေးကောငျးတဲ့ ကုမ်ပဏီတှကေနေ တိုကျရိုကျရောငျးခတြဲ့ဆိုငျ ဒါမှမဟုတျ ကုမ်ပဏီတှရေဲ့ အရောငျးကိုယျစားလှယျဆိုငျတှမှောသာ ဝယျယူသငျ့ပါတယျ။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ လကျရှိ မွနျမာပွညျမှာ အငျဂငျြဝိုငျအမြိုးအစားပေါငျး မရမေတှကျနိုငျအောငျ ထှကျရှိနသေလို နာမညျရ Brand တှအေတိုငျး နာမညျတူနဲ့ တံဆိပျတုတှထှေကျရှိနတောကွောငျ့ ကုမ်ပဏီရဲ့ အရောငျးကိုယျစားလှယျဆိုငျတှနေဲ့ ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ ဆိုငျတှမှောသာ အရညျအသှေးမီ အငျဂငျြဝိုငျကို ရှေးခယျြ ဝယျယူသငျ့ပါတယျ။
မိုငျးလဈကွိုးတပျစီးပွီး ကီလို ၃၀၀၀ ပွညျ့တိုငျး အငျဂငျြဝိုငျတဈခါ လဲလှယျပါဘယျဆိုငျကယျပဲစီးစီး စတငျဝယျယူကတညျးက နှဈမညျမြှကွာနပေါစေ မိုငျးလဈကွိုးတပျစီးဖို့လိုသလို ကီလို ၃၀၀၀ ပွညျ့တိုငျး အငျဂငျြဝိုငျတဈခါလဲလှယျဖို့လိုပါတယျ။
တခြို့က သုံးလတဈခါ အငျဂငျြဝိုငျလဲလှယျရမယျ၊ နှဈလတဈခါ အငျဂငျြလဲလှယျရမယျဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ မှားယှငျးနပွေီး ဒိုငျခှကျမှာပွသနတေဲ့ ကီလိုမီတာကိုကွညျ့ပွီး ကီလို ၃၀၀၀ ပွညျ့တိုငျး အငျဂငျြဝိုငျတဈခါလဲလှယျဖို့လိုပါတယျ။
လမျးပနျးဆကျသှယျရေးကောငျးမှနျပွီး ဖှံ့ဖွိုးပွီး ပွညျပနိုငျငံအခြို့မှာတော့ ကီလို ၅၀၀၀(သို့) ကီလို ၆၀၀၀ ပွညျ့မှ အငျဂငျြဝိုငျတဈကွိမျလဲလှယျကွပမေဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လမျးအနအေထား၊ သုံးစှဲမှုအခွအေနေ ကှာခွားမှုတှကွေောငျ့ အကွမျးဖဉျြး ကီလို ၃၀၀၀ ပွညျ့တိုငျး လဲလှယျသငျ့တယျလို့ အကွံပွုရခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။
လီဗာဆောငျ့ဆှဲပွီး မောငျးထှကျတာမြိုး မလုပျပါနဲ့
ပနျ့စနဈနဲ့ အလုပျလုပျတာမြိုးမဟုတျတဲ့ Manual ဂီယာသုံး ဆိုငျကယျတှမှောတော့ လီဗာဆောငျ့ဆှဲတဲ့အခါတှမှော ဂီယာနံပါတျနိမျ့ရငျ ဆောငျ့ထှကျတာမြိုးရှိတတျပမေယျ့ ဂီယာနံပါတျ4လို ဂီယာမွငျ့ဖွဈနရေငျ လီဗာ ရုတျတရကျဆှဲလိုကျရငျတောငျ ဆောငျ့ထှကျတာ အလှနျနညျးပါးလှပါတယျ။
ပနျ့စနဈနဲ့အလုပျလုပျတာ မဟုတျတဲ့အတှကျ ဂီယာမွငျ့မှာ လီဗာ ရုတျတရကျဆောငျ့ဆှဲလိုကျရငျ စကျသံဝပျသှားတာကလှဲပွီး အမွနျထထှကျသှားမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ EFI Type (PGM-FI) သုံး Honda, YAMAHA စတဲ့ ဆိုငျကယျတှမှောတော့ လီဗာဆောငျ့ဆှဲလိုကျရငျ ဆှဲလိုကျသလို ထထှကျသှားတတျပါတယျ။
အခုခတျေမှာ အထူးသဖွငျ့ Honda Click, Scoopyi စီးတဲ့ လူငယျတှမှော စထှကျခြိနျကတညျးက လီဗာကို တောကျလြှောကျတငျပွီး ပွနျမလြှော့တော့ဘဲ အခြိနျကွာပွီး အရှိနျပွငျးနဲ့ မောငျးနှငျကွတာတှတှေနေ့ရေပါတယျ။
အဲဒီလို လီဗာကို ရုတျတရကျတငျ ဆောငျ့ထှကျပွီး လီဗာပွနျမလြှော့ပေးခွငျးဟာ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ အငျဂငျြကနေ ထုတျပေးတဲ့ ကရိုငျးရှုပျနဲ့ဆကျထားတဲ့ ၆ လုံးဘောတို့၊ ဂါပနာရှူးတို့ ပတျသားကွိုးတို့၊ ကရောငျးအုံထဲက ပငျနယံတို့ စတဲ့အစိတျအပိုငျးတှေ ပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။ ပကျြစီးစနေိုငျတယျဆိုတဲ့နရောမှာ ခကျြခွငျးကွီး ပကျြစီးသှားမှာမြိုးမဟုတျဘဲ ရရှေညျမှာ အထိနာလာတာနဲ့အမြှ အငျဂငျြရုနျးအားဆှဲအားတှမှော ကဆြငျးစနေိုငျပါတယျ။
ဆိုငျကယျတဈစီးရဲ့ အငျဂငျြသကျတမျး ပုံမှနျထိနျးသိမျးပွီး မောငျးရငျ ငါးနှဈခံမယျဆိုရငျ လီဗာဆောငျ့ဆှဲပွီး ပွနျမလြှော့ဘဲ အရှိနျပွငျးမောငျးတဲ့ဆိုငျကယျဟာ ၃ နှဈခှဲဝနျးကငျြဆိုရငျကို အငျဂငျြ အနညျးငယျကနြတေတျပါတယျ။ အဲဒီလို အငျဂငျြရုနျးအားဆှဲအား ကဆြငျးသှားပွီဆိုရငျ သငျ့အနနေဲ့ ပွနျရောငျးခြိနျမှာ မိုဒယျတူ၊ အမြိုးအစားတူဆိုငျကယျတှထေကျကို အနညျးဆုံး တဈသိနျးကနေ သုံးသိနျးကွား ဈေးနှိမျခံရတော့မှာဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သငျ့ဆိုငျကယျအငျဂငျြသကျတမျး ကွာရှညျခံခငျြတယျဆိုရငျ လီဗာဆောငျ့ဆှဲပွီး ထှကျတာမြိုးတှေ၊ လီဗာတငျထားပွီး လီဗာပွနျမလြှော့ဘဲ တောကျလြှောကျအရှိနျပွငျးမောငျးနှငျတာမြိုးတှေ ရှောငျကွဉျဖို့လိုပါတယျ။
ရှမှေ့ာပွောပွခဲ့တဲ့ Brand New စတငျဝယျယူခြိနျကတညျးက အငျဂငျြကငျြ့ရမယျ့ကာလမှာ ကီလိုမီတာအလိုကျဂရုပွုမောငျးနှငျမယျ၊ အရညျအသှေးမီ အငျဂငျြဝိုငျကို ပုံမှနျလဲလှယျမယျ၊ လီဗာဆောငျ့ဆှဲပွီး အရှိနျပွငျးမောငျးထှကျတာမြိုးတှေ ရှောငျကွဉျမယျစတဲ့ လိုကျနာဖှယျရာတှကေိုသာ ကငျြ့သုံးသှားမယျဆိုရငျ သငျ့ဆိုငျကယျ အငျဂငျြသကျတမျး ကွာရှညျခံစမှောဖွဈသလို Brand အလိုကျ စကျရုံတှကေ သတျမှတျထားတဲ့ သကျတမျးအပွညျ့ စီးနငျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဆိုငျကယျအငျဂငျြသကျတမျးလညျး ကွာရှညျခံမယျ၊ ပကျြစီးမှုလညျး နညျးပါးပွီဆိုရငျ သငျ့အတှကျ ပွနျရောငျးခြိနျမှာ ဈေးကောငျးရရှိစမှောဖွဈသလို ပွငျဆငျရမှုနညျးပါးတာနဲ့အမြှ ကုနျကစြရိတျပါ သကျသာစမှောဖွဈပါတယျ။
ငှကွေေးကုနျကမြှုနညျးပါးတာနဲ့အမြှ ဆိုငျကယျနစေ့ဉျအသုံးပွုနတေဲ့ သငျ့အတှကျ ဘယျနရော ဘယျခရီးသှားသှား စိတျခမျြးသာမှုရနစေမှော ဧကနျပါပဲ။
မြန်မာလူမျိုး တို့ရဲ့ အကြိုက် ပစ္စည်းတ စ်ခုဝယ်ရင် ဘာပစ္စည်းပဲဖြ စ်နေနေ ဈေးသက်သာပြီး တာရှည်ခံတာမျိုးကို လိုချင်ကြပါတယ်။ ဈေးသက်သာ တာကိုသာ ရွေးချယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ြ ကတာက ပိုများပါတယ်။ ဆိုင်ကယ် တစ်စီး ဝယ်တဲ့အခါမှာလည်း မြို့ကြီးတွေ ကလွဲရင် နယ်မြို့တွေမှာ ဈေးသက်သာလေ ကြိုက်လေ ဆိုတဲ့ အကျင့်က လူတော်တော် များများမှာ စွဲမြဲနေကြပါတယ်။
ဆိုင်ကယ် တစ်စီးမှာလည်း ဈေးနှုန်းနဲ့ထပ်တူ Brand အလိုက် ဈေးကောင်းရင် ကောင်းသလို အရည်အသွေးကွာခြားပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရဲ့ အရည်အသွေးဆို တဲ့နေရာမှာ အဓိက ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင် ရုန်းအားဆွဲအားနဲ့ ကြာရှည်အသုံးခံမှုကို ကြည့်ရှုကြပြီး တည်ဆောက်မှုမှာ ပါဝင်တဲ့ သံဖရိမ်နဲ့ ကာဗာတွေ ကြံ့ခိုင်မှုရှိမရှိကို ဒုတိယအေ နနဲ့ ကြည့်ရှုလေ့ရှိကြပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်မှာ ရောင်းချနေတဲ့ ဆိုင်က ယ်တွေကို လေ့လာကြည့်ရင် တရုတ်ဆိုင်ကယ်ထဲမှာ Haojue ဆိုင်ကယ်တစ်မျိုးတည်းသာ အင်ဂျင် ၂ နှစ်အာမခံပေးပြီး KenBo, Lifan. ZongShen စတဲ့ နာမည်ရ Brand တွေကတော့ အင်ဂျင် ၁ နှစ်အာမခံပေးကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
လက်ရှိ ဈေးကွက်ထဲ မရေမတွက်နိုင်အောင် ဝင်ရောက်နေတဲ့ တရုတ်တံဆိပ်သစ်ဆိုင်ကယ်တွေမှာတော့ အင်ဂျင် ၅ လအာမခံ၊ ၃ လအာမခံပေးကြသလို အများစုကတော့ အင်ဂျင် Warranty မပေးကြပါဘူး။
အင်ဂျင် Warranty မပေးတဲ့ တရုတ်တံဆိပ်သစ်ဆိုင်ကယ်တွေကို လေ့လာကြည့်ရင် Spare Parts ရရှိမှုပါ ခက်ခဲနေတတ်တာ လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးကတော့ ရုန်းအားဆွဲအားကောင်းတဲ့ အင်ဂျင်ကို ရရှိချင်တယ် သင့်ဆိုင်ကယ်ကို ကြာရှည်အသုံးခံချင်တယ်ဆိုရင် ဈေးနှုန်းထက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်မယ့် နာမည်ရ Brand တွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူစီးနင်းဖို့ လိုပါတယ်။
နာမည်ရ Brand တွေ ဝယ်စီးရုံနဲ့မပြီးဘဲ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့ပါလိုအပ်တာကြောင့် C & C Info ရဲ့ ဆိုင်ကယ်ချစ်သူတွေအတွက် ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်သက်တမ်းကြာရှည်ခံချင်တယ်ဆိုရင် လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့် အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Brand New ဆိုင်ကယ်တိုင်း အင်ဂျင်ကျင့်ပေးရပါတယ်
ဆင်ပေါက်စလေးတစ်ကောင် မွေးပြီး လသားအရွယ်မှာတင် သွားနိုင်အောင် ခိုင်းတာလုပ်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးရသလိုပဲ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးမှာလည်း စတင်ဝယ်ယူခါစ Brand New ဆိုင်ကယ်ရဲ့ အင်ဂျင်ကို လေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်။
သက်ရှိသတ္တဝါမဟုတ်ဘူး စက်ပစ္စည်း ငါခိုင်းရင် ခိုင်းသလို လုပ်ပေးမှ ငါမောင်းချင်သလို မောင်းမှာပဲ ဆိုတဲ့စိတ်ရှိနေရင်တော့ သင့်ဆိုင်ကယ်ရဲ့ အင်ဂျင်သက်တမ်းဟာ ကြာရှည်ခံမှာ မဟုတ်သလို ငွေကြေးပေါင်း သိန်းချီပေးပြီး ဝယ်ရကျိုးလည်း နပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ပြင်ဆင်စရိတ်တွေပါ ကပ်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
စတင်ဝယ်ယူခါစ Brand New ဆိုင်ကယ်ရဲ့ အင်ဂျင်သက်တမ်းကြာရှည်ခံချင်တယ်ဆိုရင် စတင်မောင်းချိန်ကတည်းက လအနည်းကြာသည်အထိ အရှိန်ပြင်းပြင်း မောင်းတာထက် သာမန်အရှိန်နှုန်းသာရှိတဲ့ ကီလိုအနည်းငယ်ပဲ မောင်းနှင်ဖို့လိုပါတယ်။
နာမည်ရ Brand တွေရဲ့ Techanical ပညာရှင်တွေ သတ်မှတ်ထားတာကတော့ စတင်ဝယ်ယူခါစမှာ ကီလို0ရှိတာကြောင့် ကီလို0ကနေ 160 ကီလိုမီတာအတွင်းဆိုရင် တစ်နာရီကို ၃၅ ကီလိုမီတာအမြန်နှုန်းနဲ့သာ အသုံးပြုမောင်းနင်သင့်ပြီး ကီလို 160 မှ 800 ကီလိုမီတာအတွင်းဆိုရင်တော့ တစ်နာရီ ၄၅ ကီလိုမီတာ အမြန်နှုန်းနဲ့ပဲ မောင်းနှင်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားကြပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ ဒိုင်ခွက်မှာ ပြသပေးနေတဲ့ ကီလို 800 အတွင်းကနေ 1600 အတွင်းဆိုရင် တစ်နာရီ ၅၅ ကီလိုမီတာအမြန်နှုန်းနဲ့သာ မောင်းနှင်သင့်သလို ကီလို 1600 အတွင်းကာလထိ High Way ထွက်တာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုရင် High Way သွားပြီဆိုကတည်းက ဘယ်သူမဆို အမြန်ရောက်ချင်ကြတာဖြစ်လို့ ဒိုင်ခွက်မှာပြနေတဲ့ ကီလိုမီတာ အမြန်နှုန်းကို သတိမပြုတော့ဘဲ လမ်းကောင်းရင် ကောင်းသလို ယာဉ်ကြောရှင်းရင် ရှင်းသလို အမြန်မောင်းနှင်တတ်ကြတာကြောင့် Service ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက အခုလို သတိပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင်ကျင့်ရမယ့် ကီလို 1600 ကာလအတွင်းမှာ အကယ်၍ ကီလိုအလိုက် သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းထက် ကျော်လွန်မောင်းနှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လပိုင်းအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ အင်ဂျင်စက်သံနဲ့ အိပ်ဇောကနေ ထွက်လာတဲ့ အသံဟာ ဆူဆူညံညံတွေ ထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
တချို့ Honda ဆိုင်ကယ် Brand New ဝယ်စီးပြီး လအနည်းငယ်အတွင်းမှာ စက်သံဆူညံနေလို့ဆိုတဲ့ ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်က အင်ဂျင်ကျင့်ရမယ့် ကာလမှာ မြန်နှုန်းမြင့်မောင်းမိတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆိုင်ကယ်ချစ်သူတွေအနေနဲ့ အင်ဂျင်ကျင့်ရမယ့်ကာလ ကီလို 1600 အတွင်းမှာ High Way ထွက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲ သူ့သတ်မှတ်ကီလိုအလိုက် အမြန်နှုန်းကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာ မောင်းနှင်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အရည်အသွေးမီ အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ထည့်ပါဆိုင်ကယ် Brand New စဝယ်ပြီဆိုတာနဲ့ တချို့က ဆိုင်ကယ်မှာပါတဲ့ အင်ဂျင်မှာပါရှိပြီးသား အင်ဂျင်ကျင့်ဆီကို ၅ ရက်(သို့) တစ်ပတ်ခန့် စီးနင်းခိုင်းတာလည်းရှိသလို တချို့ဝပ်ရှော့ဆရာတွေက အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်တစ်ဘူးကို ချက်ချင်းလဲပေးလိုက်တာလည်း ရှိပါတယ်။
အကောင်းဆုံးက အင်ဂျင်မှာ Original ပါရှိတဲ့ အင်ဂျင်ကျင့်ဆီဟာ ကျင့်ဆီလို့ သတ်မှတ်တာကြောင့် High Way သွားတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ရင် တစ်ပတ်ခန့် စီးနင်းပြီးမှ အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်တစ်ဘူးကို လဲလှယ်သင့်ပါတယ်။
အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်တစ်ဘူးရဲ့ ဆီအရည်အသွေးနဲ့ Original ကျင့်ဆီရဲ့ ဆီအရည်အသွေး မတူသလို ကျင့်ဆီဟာ ကျင့်ဆီလို့ သတ်မှတ်တာကြောင့် တစ်ပတ်ခန့်စီးနင်း အင်ဂျင်ကျင့်ခိုင်းပြီးမှ အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်တစ်ဘူးကို လဲလှယ်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်တစ်ဘူး လဲလှယ်တဲ့အခါမှာလည်း ဈေးနှုန်းချိုသာတာထက် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကနေ တိုက်ရိုက်ရောင်းချတဲ့ဆိုင် ဒါမှမဟုတ် ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေမှာသာ ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ အင်ဂျင်ဝိုင်အမျိုးအစားပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် ထွက်ရှိနေသလို နာမည်ရ Brand တွေအတိုင်း နာမည်တူနဲ့ တံဆိပ်တုတွေထွက်ရှိနေတာကြောင့် ကုမ္ပဏီရဲ့ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဆိုင်တွေမှာသာ အရည်အသွေးမီ အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
မိုင်းလစ်ကြိုးတပ်စီးပြီး ကီလို ၃၀၀၀ ပြည့်တိုင်း အင်ဂျင်ဝိုင်တစ်ခါ လဲလှယ်ပါဘယ်ဆိုင်ကယ်ပဲစီးစီး စတင်ဝယ်ယူကတည်းက နှစ်မည်မျှကြာနေပါစေ မိုင်းလစ်ကြိုးတပ်စီးဖို့လိုသလို ကီလို ၃၀၀၀ ပြည့်တိုင်း အင်ဂျင်ဝိုင်တစ်ခါလဲလှယ်ဖို့လိုပါတယ်။
တချို့က သုံးလတစ်ခါ အင်ဂျင်ဝိုင်လဲလှယ်ရမယ်၊ နှစ်လတစ်ခါ အင်ဂျင်လဲလှယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ မှားယွင်းနေပြီး ဒိုင်ခွက်မှာပြသနေတဲ့ ကီလိုမီတာကိုကြည့်ပြီး ကီလို ၃၀၀၀ ပြည့်တိုင်း အင်ဂျင်ဝိုင်တစ်ခါလဲလှယ်ဖို့လိုပါတယ်။
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးပြီး ပြည်ပနိုင်ငံအချို့မှာတော့ ကီလို ၅၀၀၀(သို့) ကီလို ၆၀၀၀ ပြည့်မှ အင်ဂျင်ဝိုင်တစ်ကြိမ်လဲလှယ်ကြပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လမ်းအနေအထား၊ သုံးစွဲမှုအခြေအနေ ကွာခြားမှုတွေကြောင့် အကြမ်းဖျဉ်း ကီလို ၃၀၀၀ ပြည့်တိုင်း လဲလှယ်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာဆောင့်ဆွဲပြီး မောင်းထွက်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့
ပန့်စနစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့ Manual ဂီယာသုံး ဆိုင်ကယ်တွေမှာတော့ လီဗာဆောင့်ဆွဲတဲ့အခါတွေမှာ ဂီယာနံပါတ်နိမ့်ရင် ဆောင့်ထွက်တာမျိုးရှိတတ်ပေမယ့် ဂီယာနံပါတ်4လို ဂီယာမြင့်ဖြစ်နေရင် လီဗာ ရုတ်တရက်ဆွဲလိုက်ရင်တောင် ဆောင့်ထွက်တာ အလွန်နည်းပါးလှပါတယ်။
ပန့်စနစ်နဲ့အလုပ်လုပ်တာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဂီယာမြင့်မှာ လီဗာ ရုတ်တရက်ဆောင့်ဆွဲလိုက်ရင် စက်သံဝပ်သွားတာကလွဲပြီး အမြန်ထထွက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် EFI Type (PGM-FI) သုံး Honda, YAMAHA စတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေမှာတော့ လီဗာဆောင့်ဆွဲလိုက်ရင် ဆွဲလိုက်သလို ထထွက်သွားတတ်ပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ အထူးသဖြင့် Honda Click, Scoopyi စီးတဲ့ လူငယ်တွေမှာ စထွက်ချိန်ကတည်းက လီဗာကို တောက်လျှောက်တင်ပြီး ပြန်မလျှော့တော့ဘဲ အချိန်ကြာပြီး အရှိန်ပြင်းနဲ့ မောင်းနှင်ကြတာတွေတွေ့နေရပါတယ်။
အဲဒီလို လီဗာကို ရုတ်တရက်တင် ဆောင့်ထွက်ပြီး လီဗာပြန်မလျှော့ပေးခြင်းဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အင်ဂျင်ကနေ ထုတ်ပေးတဲ့ ကရိုင်းရှုပ်နဲ့ဆက်ထားတဲ့ ၆ လုံးဘောတို့၊ ဂါပနာရှူးတို့ ပတ်သားကြိုးတို့၊ ကရောင်းအုံထဲက ပင်နယံတို့ စတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေ ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ပျက်စီးစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ချက်ခြင်းကြီး ပျက်စီးသွားမှာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရေရှည်မှာ အထိနာလာတာနဲ့အမျှ အင်ဂျင်ရုန်းအားဆွဲအားတွေမှာ ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရဲ့ အင်ဂျင်သက်တမ်း ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းပြီး မောင်းရင် ငါးနှစ်ခံမယ်ဆိုရင် လီဗာဆောင့်ဆွဲပြီး ပြန်မလျှော့ဘဲ အရှိန်ပြင်းမောင်းတဲ့ဆိုင်ကယ်ဟာ ၃ နှစ်ခွဲဝန်းကျင်ဆိုရင်ကို အင်ဂျင် အနည်းငယ်ကျနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အင်ဂျင်ရုန်းအားဆွဲအား ကျဆင်းသွားပြီဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ပြန်ရောင်းချိန်မှာ မိုဒယ်တူ၊ အမျိုးအစားတူဆိုင်ကယ်တွေထက်ကို အနည်းဆုံး တစ်သိန်းကနေ သုံးသိန်းကြား ဈေးနှိမ်ခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်သက်တမ်း ကြာရှည်ခံချင်တယ်ဆိုရင် လီဗာဆောင့်ဆွဲပြီး ထွက်တာမျိုးတွေ၊ လီဗာတင်ထားပြီး လီဗာပြန်မလျှော့ဘဲ တောက်လျှောက်အရှိန်ပြင်းမောင်းနှင်တာမျိုးတွေ ရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်။
ရှေ့မှာပြောပြခဲ့တဲ့ Brand New စတင်ဝယ်ယူချိန်ကတည်းက အင်ဂျင်ကျင့်ရမယ့်ကာလမှာ ကီလိုမီတာအလိုက်ဂရုပြုမောင်းနှင်မယ်၊ အရည်အသွေးမီ အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ပုံမှန်လဲလှယ်မယ်၊ လီဗာဆောင့်ဆွဲပြီး အရှိန်ပြင်းမောင်းထွက်တာမျိုးတွေ ရှောင်ကြဉ်မယ်စတဲ့ လိုက်နာဖွယ်ရာတွေကိုသာ ကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုရင် သင့်ဆိုင်ကယ် အင်ဂျင်သက်တမ်း ကြာရှည်ခံစေမှာဖြစ်သလို Brand အလိုက် စက်ရုံတွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ သက်တမ်းအပြည့် စီးနင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်သက်တမ်းလည်း ကြာရှည်ခံမယ်၊ ပျက်စီးမှုလည်း နည်းပါးပြီဆိုရင် သင့်အတွက် ပြန်ရောင်းချိန်မှာ ဈေးကောင်းရရှိစေမှာဖြစ်သလို ပြင်ဆင်ရမှုနည်းပါးတာနဲ့အမျှ ကုန်ကျစရိတ်ပါ သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကြေးကုန်ကျမှုနည်းပါးတာနဲ့အမျှ ဆိုင်ကယ်နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ သင့်အတွက် ဘယ်နေရာ ဘယ်ခရီးသွားသွား စိတ်ချမ်းသာမှုရနေစေမှာ ဧကန်ပါပဲ။
Previous post လူသိနညျးသေးတဲ့ ပငျလယျဓားပွ တို့ရဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး ဘဝနထေိုငျမှု အကွောငျး
Next post ဆေးရုံဆငျးခှငျ့ရခါနီး ဖွဈတဲ့ လူနာတှေ ထူးဆနျးစှာ ပြောကျဆုံး သှားတာကွောငျ့ ပိတျသိမျးခဲ့ရတဲ့ ဆေးရုံကွီး